လေနုအေး: လတ်တလော ကိုယ့်ရဲ့ အကြိုက်၊ ဆန္ဒ၊ ခံယူချက်၊ ဖြစ်တည်မှု...
Posted by တန်ခူး at 3:29 AM
အစ်မ ...အချစ်ဆုံးက သားသား နံပါတ် ၁ ယူသွားတယ်နော့် အစ်ကိုက မနာလိုဘူးတဲ့ဗျး)
မတန်ခူး ကွမ်းထုတ်လေး လာဖြည်ကြည့်သွားပါတယ်။
နောက်တခုက ကိုယ့်ထက်ကြီးမှန်းမသိလို့ ညီမရေ တန်ခူးရေ နဲ့ ကွန်မန့်တွေရေးနေတာ အားနာလိုက်တာ။ အကြိမ် ၁၀၀ လောက် တောင်းပန်သွားပါတယ်။
ချိုသင်းလို့ပဲ ရင်းရင်းနှီးနှီး ခေါ်စေချင်ပါတယ်။
မရေ.. ဘာရေးရမှန်းမသိချိန်မှာ tag ခံရလို့ ပျော်လိုက်တာ အဟီး.. :D ရေးပြီးရင်လည်း လာပြောမယ်နော်.. မတန်ခူး အကြောင်းလည်း ဖတ်သွားတယ်.. :)
သူများအကြောင်းတွေ လာဖတ်သွားတယ်. ကိုယ့်အကြောင်းကတော့ ပျင်းစရာပါ။
တန်ခူးရေ.. (ပထမ comment မှာ စာလုံးကျန်သွားလို့ ဖျက်ပြီး အသစ်ပြန်ရေးတာပါ။) Tag တာကို ရေးပေးလို့ ကျေးဇူးပါ နော်..။ တကယ်ပဲ ဖေးဗရိတ် စာအုပ်လေးတွေကို ပြန်သတိရသွားတယ်။ ဟုတ်ပ.. :) မိမိမိုက်မိုက်နာမည်လေးက.... အမြဲမဝေးချင်တဲ့ အသည်းလေးရဲ့နာမည်တို့...ဟဲဟဲ....
တန်ခူးရေ "ကျွန်မ၏အကြောင်း" ရေးရတာ ခက်ပုံများ ကမ်းကုန်ရော။
ရေးမယ်နော်...။ တစ်ရက် နှစ်ရက် အတွင်း...။
မရေးခင် အရင် လာရောက်စပ်စုသွားပါကြောင်း...။
ပြီးပါပြီ ဆရာမးး))))
မြတ်နိုးရေ… အကြောင်းတွေ ပိုသိသွားတော့ ပိုခင်သွားတာပေါ့…
သူ့ အချစ်ဆုံးကလဲ သားသားပဲတဲ့ မောင်မျိုးရေ…
တကယ်ကြီးရေးပေးတာ ကျေးဇူးပါ အိမ့်ရေ…
တို့ ကတောင်းပန်ရမှာပါ ချိုသင်းရေ…
နုရေ… အလုပ်ရှုပ်နေပေမယ့် ရေးပေးရမယ်နော်…
ပန်အကြောင်းက ပျင်းစရာကောင်းမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ မဖတ်ခင်ထဲက ကြိုသိပြီးသား… ဖတ်ပြီးတော့ ပိုသိသွားတာပေ့ါ ပန်ရေ…
ကိုမာရေးသျှင်… နှူတ်ဆက်ကဗျာလေးက မိုက်တယ်…
ဟိဟိ… မ ရေ… အမှန်ပဲ… ခုကလေးပြန်ဖြစ်သလို ခံစားလိုက်ရတယ်…
မ ရေ… ခက်တာ စာပေစီစစ်ရေးကြီးကြောင့်လား… ဖတ်လို့ ကောင်းပါတယ် မ ရေ….
မကေရေ… ဒီမှာက ရိုးရိုးကြီးရယ်… သူများတွေလို သိပ်မရေးတတ်ဘူး… မကေ စာတမ်းလေးတွေ့ ပြီးပြီ…ကောင်းတယ်…
သက်ဝေရေ…. ကျေးဇူးအကြီးကြီးတင်တယ်… သက်ဝေအကြောင်းလေးက အေးချမ်းလိုက်တာ…
အိမ့်ရေ… ကျေးဇူးပါနော်… ရေးတတ်သူဆိုတော့ ဖတ်လို့ လဲ ကောင်းပါ့… ဆွတ်ပျံ့ ပျံ့ လေး….
သိလျက်နဲ့မေးနေပြန်ပါပြီ…
မတန်ခူးရဲ့ ကိုယ်ရေးအချက်အလက် ပို့စ်ထဲမှာ သားလေးက သုံးမှတ်နဲ့ ဗိုလ်စွဲသွားပါသည်။ :)
ကိုစေးထူးရေ… သားလေးက ကျွန်မဘ၀လေ….